रातमा निन्द्रा नलाग्ने समस्या भएमा के गर्ने ? | सुदुरपश्चिम खबर
पछिल्ल्लो समय कामको चाप र विभिन्न प्रकारका तनावका कारण थुप्रै मानिसहरुमा रातमा निन्द्रा नलाग्ने समस्या भएको पाइन्छ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले ६ देखि ८ घण्टाभन्दा कम सुत्ने व्यक्तिहरुमा विभिन्न प्रकारका स्वा’स्थ्य समस्याहरु पैदा हुने गर्छ । कम निन्द्राका कारण रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमि आउने, पाचन प्रक्रिया गडबढ हुने, मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने, डिप्रेशन, तौल बढ्ने जस्ता समस्याहरु हुने गर्छन् ।
दैनिक व्यायाम धेरैवटा अनुसन्धानले दैनिक व्यायाम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । दैनिक व्यायामले मिठो निन्द्रा दिलाउँछ भने निन्द्राको राम्रो रुटिन पनि बनाउन मद्दत गर्छ । साँझमा नसुत्ने दिनभर काम गरेर थाकेपछि धेरैजसोले साँझमा ‘पावर न्याप’ लिने गर्दछन् । तर यसो गर्दा रातको नि’न्द्रालाई असर गर्छ ।
दिउँसो नसुत्ने दिनको समयमा १० देखि १५ मिनेट न्याप लिनु स्वा’स्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसले थप उर्जा प्रदान गर्छ । तर दिनभर सुत्ने गरेमा रातमा निन्द्रा पर्दैन । हेभी डिनर छिटो तर थोरै खाना खाने बानी बसाल्नुपर्छ ।
रातमा मिठो निन्द्राको लागि रातिको खाना छिट्टै खानुपर्छ । साथै रातिको खाना कम खाने गर्नुपर्छ । रातमा धेरै खाँदा एसिडिटी, पेट फुल्ने र अन्य समस्याहरु हुने गर्छ र रातको निन्द्रा खटपट हुनसक्छ । म्याग्नेसियमयुक्त खाना एक अनुसन्धानका अनुसार मिठो निन्द्राको लागि म्याग्नेसियमयुक्त खाना खाने गर्नुपर्छ ।
त्यसको लागि सागपात, फर्सीको बियाँ, बदाम र सूर्यमुखी फूलको दाना जस्ता खानेकुरा रातिको खानामा सामेल गर्नुपर्छ । ग्याजे’ट्सबाट टाढा रहनुहोस् ग्याजेट्सबाट निस्किने ब्लू लाइटले मेलाटोनिन नामक हर्मोन उत्पादन गर्ने गर्छ जसले निन्द्रा नआउने समस्या हुनसक्छ । त्यसैले सुत्नुभन्दा दुई घण्टा अगाडि मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर जस्ता सामानहरुको प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
यस्ता छन् धेरै चिसो पानी पिउनुका हानीः
१। फ्रिजमा राखेको चिसो पानी पिउनाले मुटुमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । यसले स्नायुतन्तुलाई उत्तेजित गराइदिन्छ र मुटुको गति कम हुने गर्छ । यसबाट मुुटुको भल्भ खराब हुने समस्या समेत देखिन सक्छ ।
२। धेरै चिसो पानीका कारण रक्तनलीहरु खुम्चिन्छन् जसले शरीरको पाचन प्रक्रियामा असर पार्छ । खाना राम्रोसँग नपच्दा आवश्यक मात्रामा शरीरलाई पोषक तत्व प्राप्त हुन सक्दैन ।
३। धेरै चिसो पानी पिउँदा शरीरमा अनावश्यक रुपमा उर्जा खर्च हुन्छ ।
४। धेरै चिसो पानी पिउनाले घाँ’टीमा असर गर्छ । यसले घाँटीका मांशपेशी तथा कोशिकाहरुमा असर पर्नुका साथै संक्रमणको खतरा हुन्छ ।
अन्य बेफाईदा: गर्मी मौसममा चिसो पानी कसलाई पो पिउन मन नलाग्ला र ? अझ फ्रिजमा राखेको चिसो चिसो पानी पिउनुको त मज्जा नै छुट्टै हुन्छ । त्यसैले त धेरै जसो मानिस गर्मीमा फ्रिजकै पानी पिउन रुचाउँछन् । तर के तपाईलाई थाहा छ फ्रिजको पानी सेवन गर्नु हाम्रो स्वा’स्थ्यको लागि कत्तिको हा’निकारक छ ?
१. कृतिम तरीकाले चिसो बनाइएको फ्रिजको पानी सामान्य तापक्रम भन्दा निकै चिसो हुन्छ, जुन हाम्रो स्वा’स्थ्यका लागि हानिकारक छ ।
२. फ्रिजमा चिस्याइएको पानी पिउनाले पेटको ठूलो आन्द्रामा नोक्सान पुग्दा ठूलो आन्द्रा सुक्न थाल्छ जसले गर्दा आ’द्राले सही तरीकाले काम गर्न सक्दैन । परिणामस्वरुप, विहानको समयमा पेट खल्लास नभई पेटको समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
३. धेरै चिसो पानीको सेवनले लामो समयसम्म कब्जियतको समस्या हुनेगर्छ ।
४. धेरै चिसो पानीको सेवनले हाम्रो शरीरको को’षिकाहरु सुक्न थाल्छ र जसले गर्दा उक्त कोषिकाहरुले सही तरीकाले काम गर्न सक्दैन । यसको असर तपाईको मेटा’बोलिज्म तथा स्वा’स्थ्यमा समेत सिधै असर पर्ने गर्छ ।
५. फ्रिजको पानी पिउनाले घाटी खराब हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । यदि तपाईले दिनहुँ फ्रिजको चिसो पानी से’वन गर्नुहुन्छ भने होशियार हुनुहोस् । यसका कारण घाँ’टी, टन्सिल, फोक्सो तथा पाचन प्रणालीमा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । (urlabarinews.com बाट साभार )